Obbo Baqqalaa Garbaa yaalii fooyya'aa dhorkaman - BBC News Afaan Oromoo
Dura taa'aa itti aanaa KFO kan ta'aniifi wayita ammaa mana hidhaa Qilinxoo kan jiran Obbo Baqqalaa Garbaa bakka yaalii fooyyee itti argachuu danda'an deemanii akka hin yaalamne dhorkamani jedhu maatiin isaanii.
''Fayyaan isaa homaa jijjiirama hin qabu. Ijji isaa bitaa walumaagalatti gara arguu diduutti deemaa jira. kunimmoo dhibee dhiibbaa dhiigaa kana dura yeroodhaan yaalamuu dhiisuu irraa kan dhufeedha. Warri Hospitaala Miniliik gara Kilinika dhuunfaatti barreesaniifii ture. Haata'u malee seerri mana hidhaa kana hin hayyamu mana yaalaa dhuunfaatti yaalchifnee hin beeknu hin yaalchifnus deebii jedhutu kennameefii'' jechuun Intalli obbo Baqalaa Garbaa, Boontuun haala jiru BBCtti himteetti.
Erga riifariin Kiliniika dhuunfaatti barreefame dhorkameen booda mana yaalaa biraa hin geeffamne kan jettu Boontuun, dhimma kana irratti Obbo Baqqalaa fi Bulchiinsi mana hidhaa Qilinxoo bayyee wal dhabanii turan jetti.
''Hamma sadarkaa olaanaatti mana Yaalaa Mootummaatti yaalamuu danda'a jedhame. Kan isaan sadarkaa olaanaa jedhan ammoo Miniliikii. Hospitaalli Miniliik ammoo gara Kiliniika dhuunfaatti barreeseera kanaaf homaa sii gochuu hin dandeenyu jedhameeraa'' jetti Boontuun.
Dhiibbaan dhiigaa obbo Baqqalaa Garbaa dhiyeenyatti safarame 190/110 agarsiisa. Hospitaal Phaawloositti Ispeeshaalistii Onnee kan ta'an Dr. Abdulsamad Adam namni dhiibbaan dhiigaasaa hagas gahe atattamaan waldhaansa argachuu qabaa jedhu.
Dhibeen kun yoo yaalii atattamaa argachuu baate ''Onnee, Kalee, Sammuu fi Ijarratti rakkoo fiduu danda'a'' jedhan Dr. Abdulsamad.
''Dhiibbaan dhiigaa wayita dabalu qaroo ijaarratti dhiibbaa waan uumuuf yoo dafee hin waldhaanamiin dhukkubsaataan ijaan arguu akka hin dandeenye godha. Sadarkaa 4 yoo gahe ammoo rakkina ija qofa miti rakkinni onnees duukaa dhufa'' akka Dr. Abdulsamad jedhanitti.
Rakkoowwan fayyaa kanaaf hakiimaan mariyachuun barbaachisaa ta'uus dubbataniiru.